Germany, Germany 2019 Germany Visa Vanotarisira - GERMANCAX
2019 Germany Visa Vanotarisira
1 ... 43 44 45 46 47 48 49 Enda pasi
0 Nhengo uye 3 Vashanyi vari kuona nyaya yacho.
Re: 2019 Germany Visa Vanotarisira
" Reply #495: January 21, 2020, 10: 11: 47 AM »
Quot: Dilek han - Ndira 21, 2020, 12:42:17 AM
Mukadzi wangu aishanda padhuze nemunin'ina wake semushandi uye hama yake yakadzima inishuwarenzi yake, uye mushure mezuva remuchato, takatanga kumirira chikumbiro chakasiyana mukosi yemitauro.
Ndinokunzwisisa chaizvo .. Dzimwe nguva kukanganisa kunoitika muhupenyu. Takaita muchato muna Nyamavhuvhu. Ndakamirira kugadzwa kubva munaGunyana kusvika November. Ndanga ndakamirira kupihwa visa kubva munaNovember. Bazi redu rekune dzimwe nyika rakabatikana.Pangosvika masvondo mana apfuura mukadzi wangu akatumira email kubazi rekunze. Mumhinduro kune mail svondo rapfuura, takagamuchira nhau dzekuti "zvinyorwa zvekutumirwa kubva kumumiriri hazvisati zvasvika pamaoko avo, isu tinofanirwa kumirira nemoyo murefu nekuda kwekunyanyisa kuwanda".
Handikwanise kufunga kuti mumiriri haana kukwanisa sei kuwana magwaro kubazi rekunze munguva refu kudaro (mwedzi 2.5). Ini ndinonetseka kana paine dambudziko neyemumiriri kana kana isu tiine mukana wekudaidzwa mudenga remubvunzo mushure menguva yekumirira inodarika 2.5 mwedzi. (Ndinonzwa sekunge isu tichazokokwa kuti tibvunze muchinjiro mazuva mashoma apfuura) Anga ave nemazuva makumi manomwe neshanu. Ndinovimba tinowana nhau dzakanaka munguva pfupi. 🙋🏻♀️
" Reply #496: January 21, 2020, 10: 22: 54 AM »
" Reply #497: January 21, 2020, 11: 24: 07 AM »
Quote: leowoman - Ndira 21, 2020, 10:11:47 PM
Ndinokunzwisisa chaizvo .. Dzimwe nguva kukanganisa kunoitika muhupenyu. Takaita muchato muna Nyamavhuvhu. Ndakamirira kugadzwa kubva munaGunyana kusvika November. Ndanga ndakamirira kupihwa visa kubva munaNovember. Bazi redu rekune dzimwe nyika rakabatikana.Pangosvika masvondo mana apfuura mukadzi wangu akatumira email kubazi rekunze. Mumhinduro kune mail svondo rapfuura, takagamuchira nhau dzekuti "zvinyorwa zvekutumirwa kubva kumumiriri haasati zvasvika pamaoko avo, isu tinofanirwa kumirira nekuda kwekunyanyisa kuwanda, tinofanirwa kutumira tsamba zvekare".
Handikwanise kufunga kuti mumiriri haana kukwanisa sei kuwana magwaro kubazi rekunze munguva refu kudaro (mwedzi 2.5). Ini ndinonetseka kana paine dambudziko neyemumiriri kana kana isu tiine mukana wekudaidzwa mudenga remubvunzo mushure menguva yekumirira inodarika 2.5 mwedzi. (Kunze kwekusiyana kwezera, isu hatina mamiriro ezvinhu anoda kubvunzurudzwa, asi ndine moyo wekuti tichadaidzwa kuyambuka mumazuva mashoma.) Ave ari mazuva makumi matatu nemanomwe nhasi. Ndinovimba tinowana nhau dzakanaka munguva pfupi. 🙋🏻♀️
Ramba uine moyo wako mutsva, mudiwa wangu, izvo zvinononoka uye zvichinetseka nekuda kwazvo .. Vakakanda iyi tsamba kumukadzi svondo rapfuura?
Ndakanga ndine kutya kwekurambwa kana kuramba kweCapraz query, uye kana nguva ichienderera mberi, vanhu vanofunga zvinhu zvakadaro nemaune. Kune vamwe zvakare vanomirira mwedzi uye vanodaidzwa pakupera kwenguva .. Tumira 1-1,5 vhiki tiki? Ini handizive, mudiwa wangu, pamwe vangave vakataura kudaro nekuti havadi kupa ruzivo 🤷🏻‍♀️ Ini ndakamirira nhau dzako dzakanaka
" Reply #498: January 22, 2020, 01: 03: 25 AM »
Quot: Dilek han - Ndira 21, 2020, 10:22:54 PM
Iyo hurongwa haisi kufamba zvakanaka
Hatizive kana tagamuchira chero tsamba kana kuti kwete.
Ivo vakati kana isu tichiedza kuwana ruzivo, kana tichifona kana kutumira e-mail, nguva ichawedzera.
Nekuti isu takamirira kwenguva refu, pakange pasina kutsungirira.
Ndeipi guta rako?
Sezvo maitiro ako akatanga nezve mwedzi 1 wadarika, zvaisazove zvakakodzera kutumira e-mail izvozvi. Asi mushure memwedzi kana kupfuura, kana iwe usinganzwe nezve chimiro che visa yako, mumwe wako anogona kutumira e-mail kubazi rekunze kuti adzidze mamiriro e visa yako. Ini ndakanyora akawanda ekutaura pamapeji apfuura nezve kana kutumira tsamba kana kwete. Nekudaro, pane runyerekupe rwekutumirwa tsamba yakatumirwa kubazi rekune dzimwe nyika revamwe vanhu kuti hurongwa hwacho hwakakurumidza, takatumira tsamba nemutauro wepamutemo uchitsanangura mamiriro edu, tichitora kuwedzera chirongwa.
Iwe unofunga kuti uri kubatwa zvakawandisa panguva yacho nekuda kwekusagadzikana kumirira mwedzi minomwe nekuda kwemamiriro emumwe wako pamberi pevhisi yako yekushandisa. Zvakajairika kubvumirwa vhiza yemwedzi 7-1. Ndinovimba yako inotevera maitiro haazove mazhinji. Mamiriro akaoma chaizvo. Tichagara kuMagdeburg.
" Reply #499: January 22, 2020, 01: 24: 59 AM »
Quot: OzzzyJ - Ndira 21, 2020, 11:24:07 PM
Chekutanga pane zvese, ndinokutendai nekuda kwezvakanaka zvako zvido.
Ehe, ivo vakangokanda tsamba yandakataurira mukadzi wangu, uye handina kukwanisa kunyatsoziva kuti chii chakaitika. Zvichida mukuru uyu aisada kupa ruzivo, pamwe zvinyorwa zvedu hazvina kutumirwa kumumiriri.
Sezvo maitiro acho anowedzera kureba, pfungwa dzisina kunaka dzinotonhora mumusoro mangu kana kwete. Hatina chisarudzo kunze kwekumirira mamiriro edu azvino.
Wakagara here kuGerman?
" Reply #500: January 22, 2020, 11: 19: 11 AM »
Quote: leowoman - Ndira 22, 2020, 01:24:59 AM
Kana pasina chakashata nezvazvo, usashungurudzwa kunze kwekunge iine mari- kana iri pamutemo zviri pamutemo, senge registry kusagadzikana, nezvimwe .. iwe unononoka ipapo ini kuverenga ako ese mameseji. Vanogona kunge vakati kwete kupa ruzivo, nei zvaizotora mwedzi 2,5 kuti mumiriri atumire? Kune avo vakanyora izvi zvisati zvaitika, vadikani? Sezvo mapepa aenda, zvinonzi dzimwe nguva bazi rekunze harina kuuya kuno, komisheni yakatumira iyo, ichiti haina kuuya kwatiri. Ndinovimba dambudziko rako rinopera pamwe neiyo pfungwa yako munguva.Minamato yangu ndinemi newe. 🙏🏻
Ini ndaive nemabasa echiremba andaifanira kubata, asi iniwo ndakanhonga zvinhu zvangu, ndiri kuairport izvozvi now
" Reply #501: January 22, 2020, 10: 19: 15 AM »
Zvakatorwa: OzzzyJ - Ndira 22, 2020, 11:19:11 AM
Isu hatina chero mamiriro ezvinhu asina kunaka kuti tipe visa inoramba. Mukadzi wangu anotove nebasa risingaperi. Tine imba yatinogona kugara. Isu hatina yekutonga, hatina matambudziko ekunyoresa, tenda Mwari Sezvo maitiro acho anosvika akareba, vanhu vanobva vatanga kuwana zvakaipa pfungwa.Ndinoziva kuti sezvo isu takaroora zviri pamutemo uye tine ese mamiriro, iyo vhiza inowana yekutanga kutenderwa. Asi riini?
Ndinokushuvira rombo rakanaka uye mufaro muhupenyu hwako hutsva. Ndinovimba kukuona rimwe zuva 🙋🏻‍♀️
" Reply #502: January 24, 2020, 05: 03: 18 AM »
" Reply #503: January 24, 2020, 10: 41: 14 AM »
Quot: Dilek han - Ndira 24, 2020, 05:03:18 PM
Tsamba yangu yakasvika nhasi nhasi
Vakatikumbira kuratidza chokwadi nezvewanano yedu
Wotaura weWapap, wanga uri kupi musangano wekutanga, uyo akaunza mapikicha emuchato uye zvinhu .. zvine chekuenderana nemubhadharo wakanangana nepepa raakashanda kwemakore mashanu.
Izvi zvinoreva chii
Icho chikonzero ivo vanoda yako WhatsApp tsamba uye mafoto: kuti unzwisise kana imba yako iri yechokwadi. Sezvo mumwe wako ari mutsva pabasa rake razvino, ivo vanoda magwaro ane chekuita nebasa raakamboshanda, kana angangoshanda mune rake rekare basa, kana aine dambudziko nebasa rake. Nekuti mumwe wako anosungirwa kukuchengeta kana iwe uchiendako. Ane nguva yakareba sei akashanda pane yapfuura basa, angave / iye achizove asingagumi pabasa rake idzva, anogona kunge achifunga nezvemibvunzo yake. Germany inyika yakavakirwa pachirongwa chakanyanya chekuvimbisa. Vanobatanidza kukosha kukuru mukuvandudzwa kwehupfumi hwemhuri. Ndosaka ivo vachidawo zvinyorwa zvemabhizimusi emumwe wako kana iwe ukavapa magwaro uye mapikicha avanokumbira kwauri, ndinofunga panogona kunge pasina matambudziko.
" Reply #504: January 26, 2020, 06: 00: 38 AM »
Ayyyy ndinofara kwazvo😁😊
Tsamba yakauya kumukadzi wangu kubva kubazi rekunze. Visa inowanzo bvumidzwa mukati mevhiki 1-2 mushure meiyi tsamba ... nhasi izuva redu rechi83. Ndinotarisira nhau dzakanaka🙏
" Reply #505: January 27, 2020, 09: 48: 41 AM »
1 ... 43 44 45 46 47 48 49 Enda kumusoro